Tun Tun's Photo Diary: Penang Trip Day 2, Cheong Fatt Tze Mansion #6
The Worst Experience in my Penang Trip. Why?
1. You are not allowed to walk around and see the house.
2. You have to listen the story of this house for the entire tour from the Guide whose English is not easily understandable.
3. There is an aggressive staff who is watching the tourists not to walk around the house. His job is to make sure tourists have to listen and follow the Guide story.
4. Photo taking is strictly prohibited. If you are spotted taking picture inside the house even with Hand phone, the guard will shout at you to buy the photography pass (more expensive pass) or 'Leave the house". WTF?
I was one of them who get caught takingafew snap of the building. In my opinion, nowadays, everyone has hand phone and can takeashoot easily. I do understand that I have to respect the rule of the house but I took photos because I saw other tourists also doing it during the tour. But the staff treated differently to different tourists. To someone, he warned like 'Sir, Please don't take pic". For other, he shouted "If you take pic, you have to leave the house or pay RM 250". Very Aggressive!!!
I did notice thatalot of tourists including myself in the tour are bored of listening to the guide's story. But we have to stay near her and are not allowed to move away from her. It was one of the worst 1 hour experiences in my Penang Trip. I wish I just skipped that place. Besides my worst experience, there is not much thing to see the mansion itself. It is justatypical Chinese old building which can be found in other South East Asian countries. That's why, I don't recommend this place to anyone unless you want to kill time or getafree ticket to the mansion.
18-Aug-2012, Fort Cornwallis က အပြန် ဟောဒီ Cheong Fatt Tze Mansion ကိုတွေ.တာနဲ. ၀င်ကြည့်ဖို. ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပီနန်မြို.ရဲ. Attraction ထဲမှာတစ်ခုပါတယ် ဆိုတာဖတ်ဖူးလို.ပါ။ သူက အချိန်နဲ. ၀င်ရတယ်။ ကိုယ်ဝင်ချင်တဲ့ အချိန် ၀င်ကြည့်လို.မရဘူး။ Guided Tour ရှိတဲ့အချိန်မှ ၀င်ရတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော် လက်မှတ်ဝယ်ဖို. စုံးစမ်းလိုက်တော့ Tour က အခုစတော့မှာ ၀င်တော့ ၀င်တော့ ဆိုတော့ လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ၀င်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အချိန်ကွတ်တိ မဖြစ်တဲ့သူဆိုရင် Tour ရှိတဲ့ အချိန်ထိ စောင့်ရမှာပေါ့။
အထဲရောက်တော့ Guide အဖွားကြီးက စည်းကမ်းချက်တွေကိုပြောပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာ ကိုယ့်ဖာသာ လျှောက်မကြည့်ဖို.၊ ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖို.၊ သူပြောတဲ့ ပုံပြင် ကိုပဲ နားထောင်ဖို. စသဖြင့်။ သူက ဒီ စံအိမ်ကြီးရဲ. သမိုင်းကို ၁ နာရီလောက်ကြာအောင် စပြီးပြောတော့မှာပါ။ အားလုံး အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အထိပေါ့။ Tourist တွေ Guide အနားမှာ နေအောင် စောင့်ကြည့် တဲ့ ကုလား ၀န်ထမ်း တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ လျှောက်ကြည့်တာ၊ ဖုန်းတဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တာ မိရင်၊ အဲ့ကုလား က လာပြီး အော်ပါတယ်။ 'Guide နားမှာပဲနေ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ရင်၊ ကင်မရာခွန်ဆောင်ပါ၊ ဒါမှ မဟုတ် အိမ်က ထွက်သွား" စသဖြင့် ။ တော်တော်လေးကို မိုက်ရိုင်းပါတယ်။ အခုခေတ်ကြီးမှာ လူတိုင်း ဖုန်းကိုင်နေတော့ လူတွေက ဖုန်းနဲ. ရိုက်ချင်ကြမှာပေါ့။ သူများအိမ်လာလည်လို. အိမ်စည်းကမ်း လိုက်နာရမည် ဆိုတာတော့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကလည်း သူများတွေ ရိုက်နေတာ တွေ.လို. နည်းနည်းခိုး ရိုက်ကြည့်တာ။ ကုလားက လာအော်ပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း Guide ပြောတဲ့ ပုံပြင်ကို နားမထောင်ချင်၊ ကိုယ့်ဖာသာ လဲ လျှောက်ကြည့်လို. မရဆိုတော့ Tour ပြီးတဲ့ အထိ ထိုင်ပြီး စောင့်နေရတာပေါ့။ ကိုယ့်လို လူတွေလဲ အများကြီး။ Guide ရဲ. ပုံပြင်ကို နားမထောင်ပဲ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အချိန်ကုန်တာ ထိုင်စောင့် နေကြတယ်လေ။ အောက်ကပုံကိုသာ ကြည့်ပါတော့။ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်တဲ့သူ ရှိလားဆိုတော့လည်း၊ ရှိတယ်လို.ပြောရမှာပေါ့။
ဒါပုံတွေက ကုလား အအော်ခံပြီး ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေနော်။း) ကုလား က အဖြူ Tourist တွေ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ မိရင်တော့ "Sir Sir" နဲ. နေတာ။ ဒို.လို အာရှသားတွေ ကိုတော့ လေသံတမျိုးနဲ.။ တော်တော် အမြင်ကတ်ဖို. ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်က ပိုက်ဆံ ပေးပြီး သူများ အဟောက်ခံ လိုက်ရတယ်။း(
Guide အဖွားကြီးက နေရာ ၃ နေရာလောက် ရွေ.ပြီး ပုံပြင်ပြောပါတယ်။ သူရွေ.တဲ့ နေရာပဲ လိုက်ရွေ.ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ သွားပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ကျွန်တော်အမြင် ဒီအိမ်ကြီးက ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိပါ။ သူတို. ပြချင်တာက ရှေးတုန်းက မလေးရှားက တရုတ်တွေ ဘယ်လောက် ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ပြချင်တာပါ။ ဒီထက်စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့ စံအိမ်တွေ South East Asia မှာ ရိုက်သတ်လို. မကုန်ဘူး။ အလကားတောင် ၀င်ကြည့်လို.ရဦးမယ်။
၁နာရီလောက် ပုံပြင် ပြောပြီးသွားတော့ Tourist တွေ အကုန်လုံးကို အပေါက်ဝ ပြန်ပို.ပါတယ်။ ပြန်လို.ရပါပြီပေါ့။ ကိုယ့်ဖာသာ ဒီအိမ်ထဲမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ရင် Camera ခွန် RM 250 လား ပေးပါ ဒါမှမဟုတ် ဒီမှာတည်းပါပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ ဒီအိမ်ကနေ ပြန်ချင်လှပြီ၊ နောက်လာဖို. မပြောနဲ.။ ၀င်ကြေးပေးထားလို.သာ တန်အောင် Tour အပြီးထိနေတာ။း)
အမှန်တော့ ဒီအိမ်ကို ၀င်ကြေးပေးပြီး ၁နာရီ ဒုက္ခခံ စရာမလိုပါဘူး။ အပြင်ကနေကြည့်ရုံနဲ. တင်လုံလောက်ပါပြီ။ မရောက်ဖူးတဲ့ ကျွန်ေတာ်လိုလူမျိုး ဆိုရင်တော့ ရှေးဟောင်းတိုက်အပြာကြီးတွေ.တော့ စိတ်ဝင်စားမိတာ အမှန်ပါပဲ။ အထဲရောက်တော့မှပဲ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ နေရာမျိုး မဟုတ်ပဲ သာမန် ရှေးဟောင်းအိမ် တခုပဲ ဆိုတာ ကို သိလိုက်ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးသွားတာတော့၊ နောက်တခါ လာစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီလိုနေရာမျိုးကို ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝ Recommend မပေးပါ။ :)
ဒီအိမ်ကြီးကနေ ပြန်တော့ Penang ခရီးရဲ. နောက်ဆုံး နေရာဖြစ်တဲ့ Butterfly farm ကို သွားလည်ပါတယ်။ နောက်ပို.စ်မှာ ဆက်ရေးပါမယ်။
at 11/27/2015 09:06:00 PM